Iimfashini zemihla ngemihla zibhenca ukuba zenziwe ngobuchule. Oku kuya kufumaneka ngokwahlula isambatho esilula ngento ekhethekileyo, eyodwa. Ngoko, isibini esithandanayo silandela intsapho kwaye sivame ukugqoka iimpahla okanye imibala efanayo. Kwaye abavelisi bembatho benza iinqonga, ii-T-shirts kunye ne-T-shirts, izitifiketi apho izinto eziqhelekileyo ziguqulelwa zibe yinto ekhethekileyo.
Inkwenkwezi kunye neentsimbi zangaphambili kwi-T-shirts
Amafilimu ase-Hollywood kunye nabasetyhini befashoni bayazi indlela yokuma phakathi koogxa babo kwivenkile. Akunjalo ngowokuqala ukuba ii-T-shirts ezinomfanekiso wabantu abadumileyo banandipha ukuthandwa. Kubonakala ngathi iingubo eziqhelekileyo zokushicilela, kodwa zigqutywe nakwabo inkwenkwezi yazo ebizwa ngokuba yi "Walk of Fame". Ngoko, uKaty Perry kwixesha lakhe lokubhala iingoma, ehamba ngezitalato kunye nomfanekiso womnye we-American reality show, uPauli Dee. Kwaye iMadonna ngisho nakwimiboniso yakhe ibonakala kwii-T-shirt ezinamaphepha. U-Halle Berry, naye, uyaziqhenya ngokuthi uyavotela uMongameli u-Obama wamanje.
Ukugqoka i-t-shirt yeenkwenkwezi, akudingeki ukuba udume. Ewe, kwaye abavelisi banikezela ukhetho olubanzi lweengubo ngokuprinta okungavamile. Kuya kunceda nje kuphela ukuveza ubuntu, kodwa ngokuchanekileyo faka ngokubhaliweyo kumfanekiso.
Ishicilelo ngesitiki - sisebenza njani?
Ukuba sithetha malunga nendlela yokunamathela isitika kwiTekhthi, kuya kuba kufanelekile ukukhankanya ukuba kule meko iteknoloji yokudlulisa ifuthe isetyenziswa. Oku, ekuboneni kuqala ibinzana elihlaselayo, lithetha ukusetyenziswa kwanoma yimuphi umfanekiso kwisithambiso ngokufudumala umphathiswa ophakathi. Ngamanye amagama, ukuba kukho umnqweno ekhaya ukwenza isitika kwiTekhthi, kufuneka usebenzise isinyithi esinyani.
Eyona nto inomdla kakhulu kwaye ibaluleke kakhulu: umfanekiso unamandla kwaye unqabile naluphi na ukuhlamba. Nangona kukho uluvo lokuba kungcono ukuhlamba iimpahla ezifana nesandla, ukuba ufuna ukugcina isitifiketi imeko enhle ixesha elide.
Ngokubhekiselele kwiphepha le-stickers kwi-T-shirts, ke apha kusetyenziswa ukutshintshwa okukhethekileyo. Ityhile kakhulu kwaye ngexesha elifanayo lihlanganiswe nefilimu ebonakalayo engabonakaliyo, leyo idluliselwa kwiisishu.
Imifanekiso efunwayo iprintwa kwi-thermo-press okanye umbala wenkcazo, umshicileli we-sublimation. Inzuzo enkulu yale ndlela yukuthi kwiingubo zetekisi umfanekiso oqaqambileyo, unombala wemibala embala.
Ingubo ephezulu yengubo yeminki
Imifanekiso yesithombe ikhupha kwisitalato
Uhlobo lwezityalo zasebusika
Yintoni enxiba umkhonto ojikiweyo emadolweni?
Amaqabunga ngamabhinqa atyhidiweyo abakhayo
Izambatho zemibala yeenwele
I-Photoshoot yentombazana ekhaya
Iingcamango zefotrafet photo shoot
Yintoni enokugqoka i-choker?
Ukutshulwa kwefestile yamantombazana esitrato
Iingcamango zokufotela isithombe kunye nentando yakho
Iingcamango zokutshiza isithombe ehlobo
Iiglasi ze-Polaroid - ukukhusela kwamehlo e-sun
ILasagne esuka macaroni
UAmal Clooney wabonisa imifanekiso e-2 eyahlukileyo kwizitrato eNew York
U-Angelina Jolie noBrad Pitt kunye nabantwana bajikeleza ngeLondon baze baya kwi-cinema
Iifolothi ezintle - enye iingubo zokuhlwaya
U-Liv Tyler ulindele umntwana wesithathu
UPatrick J. Adams noTroyen Bellisario
Iibhotile zasebusika eziphathekayo
Ukukhulelwa kwamanzi ngexesha lokukhulelwa
Yintoni enxiba izihlangu eziphuzi?
Usuku loMngelosi uMikayeli
ESicily - ikhefu elwandle
I-Denim ngokubanzi ngabafazi abakhulelweyo
Umthandazo wamaOthodoki ngeziliso ezimbi kunye nokuhlaselwa
Buckwheat nge anyanisi
I-Muesli - ilungile kwaye imbi
I-Embassy yaseTanzania eBelarus
URicky Martin uthetha ngefayile kwifilimu ethi "Ukubulawa kweGianni Versace" kunye neCunning Out